Izosongwa ngeziqephu ezimbili isizini yeRHOD
BAZOHLANGANA okokugcina eziqeshini ezimbili zokusonga isizini yesibili yeThe Real Housewives of Durban Reunion (RHOD) Isithombe: SITHUNYELWE
Nqobile Masimula | May 2, 2022
NGEMUVA kwezinyembezi nokujikijelana ngamazwi ayiziswana esiqeshini sokugcina sesizini yesibili yeReal Housewives of Durban, bazohlangana bonke futhi eziqeshini ezimbili ezizokwethulwa ngusomahlaya uDonovan Goliath.
Iziqephu ezizodlala ngoMeyi 6 no-13 zizobahlanganisa bonke abebeyingxenye yohlelo, kubungazwa ukuphela kwesizini yesibili.
Ekhuluma neSolezwe ngeSonto uDonovan Goliath uthe, ubelokhu efisa ukwazi okungale mayelana nohlelo futhi kube yintokozo uma esethola ithuba lokusonga isizini yesibili.
“Kube kahle ukuthi ngigcine ngihlanganile namakhosikazi futhi ngizibuzele mathupha konke ebengifisa ukukwazi ngawo nebengingakuqondisisi kahle ngawo,’’ usho kanje uGoliath.
USam Kelly, umdidiyeli omkhulu weLet It Rain Films, ebiqopha lolu hlelo uthe uDonovan ungumethuli okahle impela ngoba ufike namahlaya futhi ukwazile ukunikeza zonke izintokazi amathuba okuthi zizwakalise uvo lwazo.
Uthe angabagabisela ngakho ababukeli wukuthi kunoqhekeko oluzogqama kanti abanye bazoqinisa ubudlelwano babo. Uveze ukuthi izinto ezizodingidwa kakhulu yindaba kaPetal, okuyindoda kaLaConco engaziwa muntu, yisigameko sikaJojo sokuthela uMabusi ngamabomu ngamanzi, nekaMaKhumalo osolwa ngokuziqhelelanisa nabanye.
Isizini yesibili ikhombise ukuthi hlelo luhlale luqenqeleza lodwa ngoLwezihlanu, ezihlokweni ezihamba phambili enkundleni yokuxhuma yeTwitter. Kanti izonke izintokazi zihamba phambili ohlelweni, okungu-Annie, Nonku, Jojo, LaConco, Londie, Mabusi, MaKhumalo noSorisha.